कसरी दाङ बाख्रापालनको लागि उत्तम ?
कसरी दाङ बाख्रापालनको लागि उत्तम ?
लमहीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख केसी
देउखुरी मङ्सिर । दाङको लमही नगर पालिका अन्तर्गत पशु साखा कार्यालय लमहीको आयोजनामा ३ दिने ब्यबसायिक बाख्रा पालन तालिम आज देखि लमहीमा शुरु भएको छ । उक्त तालिमको लमही नगर पालिकाका प्रमुख कुल बहादुर केसीले उद्घाटन गरेका हुन ।
नेपाल सरकारले नेपाल भर रहेका सबै जिल्लाहरुलाई कुन जिल्ला केका लागि सम्भावित छ भनेर सर्वेक्षण गर्दा दाङ्गको लमही बाख्रा पालनका लागि अति उत्तम भएको भन्दै किसानलाई आत्मनिर्भर हुने गरेर नया प्रबिधि बाट बाख्रा पालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन । तालिमका प्रमुख अतिथि केसीले किसानलाई र्आिथक हिसाबले बलियो बनाउन यो तालिमले सहयोग हुने बताए । परम्परागत रुपले बाख्रा पाल्दै आएका किसानलाई अबको समय अनुशार आफ्नो पेसालाई परिमार्जन गरेर आधुनिक तरिकाले लाग्न पनि प्रमुख केसीले आग्रह गरेका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख केसीले जुन किसानले आफ्नो काम प्रति तत्परता देखाएर काम गर्छ त्यस्ता किसानलाई अनुदान पनि नगर पालिकाले उपलब्ध गराउने बताए । तिन दिन सम्म चल्ने तालिमको प्रशिक्षकमा पशु शाखा कार्यालय लमहीका निमित्त प्रमुख शिबराज न्यौपाने रहेका छन । लमही नगर पालिकाका ९ वटै वडा बाट २७ जनाको सहभागिता रहेको छ । किसान दुर्गा प्रसाद सुबेदीको अध्यक्षतामा शुरु भएको तालिमको सहजीकरण पत्रकार प्रिया स्मृती गजमेरले गरेका थिए ।